एकै परिवारका ९ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु, दागबत्ती दिने कोहि भएन ! « गोर्खाली खबर डटकम
एकै परिवारका ९ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु, दागबत्ती दिने कोहि भएन !
वालिङ – पहिरोमा पु’रिएर ज्यान गु’माएका नौ जनाको रामनदी धाम (राम्दी) मा बिहीबार साँझ सा’मूहिक दा’हसंस्कार गरिएको छ । स्याङ्जा र पाल्पाको संगमस्थल रामनदीधामस्थित कालीगण्डकी नदीमा सा’मूहिक दा’हसंस्कार गरिएको हो ।
नौ जनालाई आठ वटा छुट्टाछुट्टै चिता बनाईएको थियो । ६ महीनाका बालकलाई १९ वर्षीया आमा बिनिता नेपालीसँगै एउटै चितामा राखेर दा’हसंस्कार गरिएको नेपाल दलित सङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष लिलबहादुर रनपालले बताउनुभयो । सबैजना एकैघरका भएकाले दा’गबत्ती दिने परिवारभित्रैको कोही पनि नभएपछि आफन्तमध्येका जीबलाल परियारले सबै जनालाई दा’गबत्ती दिनुभयो ।
“पहिरोमा पु’रिएर ज्यान गुमाएका सबैको शवलाई गह«ौं प्राथमिक अस्पताल वालिङमा पो’ष्टमार्टम गरेर रामनदीधामस्थित कालीगण्डकी नदीमा अन्तिम दा’हसंस्कार गरेका छौँ”, अध्यक्ष रनपालले भन्नुभयो । एकै परिवारका नौ जनाको एकैपटक दा’हसंस्कार गरिएको यो हृ’दयविदारक घटना नौलो भएको अध्यक्ष रनपालले बताउनुभयो । दा’हसंस्कारका लागि घाटमा पुगेका मलामी तथा आफन्तजन निक्कै भा’वविह्वल भएका थिए । घटनाले एकै परिवारका नौ जनाको ज्या’न गएपछि अहिले गाउँ नै शो’कमा डु’बेको छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर कार्यालय र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएको छ।